TuLotero, mividiana loteria Krismasy amin'ny iPhone | Vaovao IPhone
TuLotero, mividiana loteria Krismasy amin'ny iPhone
Ankehitriny efa akaiky dia akaiky ny fialantsasatra, mandresy tapakila loteria Krismasy Tena mora izany noho ny fampiharana TuLotero.
Miaraka amin'ny ny fampiharana TuLotero anao Manana am-paosin-tànana fitantanan-draharaham-panjakana folo miparitaka manerana ny jeografia Espaniola ianao, ankoatr'izay, ny fangatahana dia tsy mitaky komisiona fanampiny. Haloanao ny vola ilaina amin'ny fandraisana anjara amin'ny tapakila amin'ny Christmas Lottery, tsy misy hafa.
Tombony iray hafa natolotr'i TuLotero ho an'ny antsapaka Krismasy dia ny vitantsika tehirizo ny tahiry azontsika vidina na omena antsika izy ireo, noho izany dia hanana antoka bebe kokoa isika raha toa ka very na mihasimba ny ampahafolo tany am-boalohany.
Inona no mitranga amin'ny andro fisarihana? Raha manana TuLotero napetraka amin'ny iPhone ianao, hahazo fampandrenesana eo noho eo momba ny loka ianao ary ny vola mifanentana aminao, izay halainao ho azy koa.
Ankoatra ny fandraisana anjara amin'ny Lottery Noely, TuLotero koa manome anao fidirana amin'ny raffles sy filokana hafa an'ny Fanjakana toa an'i El Gordo, La Primitiva, Euromillions, Bonoloto, Quinielas ary Quinigol.
Na dia tsy mividy fizarana mampiasa TuLotero aza isika dia afaka foana ampiasao ho fampiharana fangatahana ny fampiharana hahafantarana ny isa mandresy sy ny valin'ny filokana na dia tsy mandray anjara amin'izany aza isika. Ny fampiharana dia havaozina tsy tapaka mba hanomezana anay ny raffles farany natao.
Raha tsy fantatrao ny tombony omen'ny TuLotero anao dia tohizo hatrany ny famakiana azy manana fampiroboroboana izy ireo izao mavitrika izay mety hahaliana anao.
Mahazoa anjara 1 € maimaimpoana
Ho fampiroboroboana ny Noely, TuLotero dia manome antsika fandraisana anjara amin'ny 1 Euro amin'ny isa 90021 ho an'ny antsapaka Lottery Nasionaly hatao amin'ny 22 Desambra 2015.
Raha te handray anjara dia mila manaraka ireto dingana manaraka ireto fotsiny ianao:
Sintomy ny fampiharana TuLotero ho an'ny iPhone na iPad avy amin'ny App Store:
TL: Loteria sy filokana amin'ny fanjakanamaimaim-poana
Ao anatin'ny fampiharana dia mankanesa any amin'ny fizarana "Kaonty / Safidy", safidio ny safidy "Akaro ny fampiroboroboana" ary ampidiro ity kaody fampiroboroboana manaraka ity:
iPhone amin'izao fotoana izao
Ity fampiroboroboana ity dia manan-kery ho an'ny mpampiasa vaovao ny fampiharana ihany. Ary izany no mora raiso ny fandraisana anjaranao € 1 misaotra an'i TuLotero. Mirary anao ho tsara vintana!
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao IPhone » Fampiharana iPhone » TuLotero, mividiana loteria Krismasy amin'ny iPhone
Pangu dia miasa amin'ny Jailbreak ho an'ny iOS 9.2